Fa maninona no mifidy rafitra famantarana nomerika ivelany? - Easy Multi Display
No comments sur Fa maninona no mifidy rafitra famantarana nomerika ivelany?Posted in Digital Signage Par Clemnamoaka Enga anie 26, 2021 Enga anie 28, 2021
Inona ny signage nomerika ivelany?
Maninona no mampiasa rafitra famantarana nomerika ivelany?
Ny vidin'ny rafitra famantarana nomerika ivelany?
Raha te hahalala bebe kokoa ianao
Vao nandre momba "takelaka nomerika ivelany"fa tsy fantatrao hoe inona marina izany? Sa te hahafantatra bebe kokoa momba an'ity rafitra ity izay ampiasaina amin'ny karazana orinasa rehetra ianao?
Ny takelaka nomerika dia misy endrika maro ary fantatray fa mety ho sarotra ny mahatakatra ny fiovaovan'ny vokatra rehetra. Izany no antony nanapahantsika hevitra androany hiresaka aminao amin'ny antsipiriany bebe kokoa takelaka nomerika ivelany!
Taratasy fisoratana anarana antsoina koa hoe "totem"(LED matetika) mamela anao hanao doka any ivelany, hampita vaovao na hampiroborobo ny hetsika kaominaly, fanatanjahantena ...
Araka ny efa nolazainay teo aloha, ny ankamaroan'ireo totem ireo dia mampiasa teknolojia LED satria mampamirapiratra sy mahasarika ny mason'ireo mpandalo azy io.
Rafitra famantarana famantarana ivelany no ahafahanao manao dokambarotra mora foana ny famantarana nataonao. Ankoatr'izay, ity rafitra ity dia mifanaraka amin'ny zavatra ilainao, marobe tokoa ny habe azo alaina 22 santimetatra ka hatramin'ny 65 santimetatra.
Ankoatr'izay, ity rafitra ity dia voaro amin'ny toetr'andro sy ny fanimbana olona, ​​fa raha mbola matahotra an'izany ianao dia mbola afaka mividy fiantohana!
Miaraka amin'ny rafitra toa an'ity, azonao antoka fa handroso ny sonia sy hiavaka amin'ny fifaninanana. Ho fanampin'izay, afaka mamorona mivantana ny fampielezan-kevitrao amin'ny marketing ianao. Hanana fahaleovan-tena tanteraka koa ianao ary afaka manova ny fisehoanao mifanaraka amin'ny fanirianao!
Ny vidin'ny rafitra toy izany dia miovaova arakaraka ny masinina sy ny haben'ny efijery satria ny ankamaroan'ireo totem ireo dia manana solo-sainina mifangaro. Raha mila vidiny mirary ianao dia afaka manisa eo anelanelan'ny 1000 € sy 8000 € aloa amin'ny in-iray na imbetsaka.
Mety ho somary lafo ihany nefa ny tombony ara-toekarena mety lehibe koa! Hahazo fahitana betsaka ianao ary mety hampitombo ny mpanjifanao.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny takelaka nomerika indrindra ianao dia azonao atao ny manamarina ny lahatsoratray momba izany. "Inona ny fampisehoana takelaka nomerika?"Na"Fomba 5 hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa amin'ny rindrambaiko famantarana nomerika".
Afaka mitsidika ilay Signage nomerika ankehitriny tranokala izay miresaka lahatsoratra mahaliana maro momba an'io lohahevitra io.
Ny adiresy mailakao dia tsy havoaka. Mitaky saha dia marika *